Safaarada soomaalida liibiya oo sheegtay in la sii deynayo soomaalida xirixran. – Melange Apothecary
Tuesday, 22 June 2010 07:02
Tripoli:(Sominfo) Safaarada Soomaalida ee dalka Liibya ayaa sheegtay in dowladda Liibiya ay qorsheynayso siideynta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku jira Xabsiyada dalka Liibiya iyadoo Safaaradu baaq u dirtay waalidiinta dhalinyaradaasi.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Liibiya Cabdi Qani Max’ed Waceys oo wareysi siinayay Idaacada Shabelle ayaa waxaa uu sheegay in dowlada ay libiya ay sii deynayso Dhaliyarada Soomaaliyeed ee ku xiran Xabsiyada dalka Liibiya kuwaasi oo dib loogu soo celinayo gudaha dalka Soomaaliya.
Waxaa uu sheegay Safiirku in dowladda Liibiya ay ka soo horjeedo in dhalinyaradaan Soomaalida ah marka laga sii daayo Xabsiga inay galaan badda u dhaxeysa Liibiya iyo Talyaaniga isagoo intaasi ku daray in Fikirkaasina ay la qabto Safaarada Soomaaliya ee Liibiya.
Cabdi Qani Max’ed Waceys waxaa uu fariin u diray waalidiinta Soomaaliyeed ee dhalinyaradooda xiligaan ku xiranyihiin Xasbiyada dalka Liibiya isagoo ugu baaqay in ay u soo diraan dhalinyaradooda qarashaad gacan ka geysta in dalkooda dib loogu soo celiyo.
Sidoo kale Cabdi Qani Max’ed Waceys Safiirka u fadhiya Soomaaliya dalka Liibiya waxaa uu sidoo kale sheegay inaysan dowladda liibiya wax dhibaatooyin ah u geysaan dhalinyarada ku xiran xabsiyada dalkaasi islamarkaana ay iyagu ka warhayaan sida uu hadalka u dhigay.
Ugu damabeyntii Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Liibiya Cabdi Qani Max’ed Waceys waxaa uu sheegay tirada dhalinyarada ah ee haatan ku xiran xabsiyada dalka Liibiya isagoo intaasi ku daray inay ka badanyihiin 3 boqol oo dhalinyaro ah, isagoo sheegay in dowladda ay haatan soo deynayo dhalinyaradaasi.
Last Updated on Tuesday, 22 June 2010 07:07